Maxay tahay sababta xilka looga qaaday wasiirkii ow-qaafta iyo arrimaha diinta? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta xilka looga qaaday wasiirkii ow-qaafta iyo arrimaha diinta?
Maxay tahay sababta xilka looga qaaday wasiirkii ow-qaafta iyo arrimaha diinta?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xilkii Wasiirka Gaashaandhigga umagacaabey Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, iyadoo sidoo kale isla degreetadaasi xilkii laga qaadey Wasiirkii Owqaafta iyo arrimaha diinta Xukuumadda Soomaaliya, Dr Iimaan C/llaahi Cali.
Tani ayaa muuqata tallaabadii u horeysay ee uu Ra’iisul Wasaaruhu qaado, isla markaana xilka ka qaadis ku sameeyo wasiir ka tirsan Xukuumaddiisa, kaddib markii ay Labo Wasiir is casileen bil gudahood.
Wararka qaar ayaa sheegaya in xil ka qaadista Wasiirka Ow-qaafta iyo Arrimaha Diinta ay la xiriirto arrimo ku saleysan awood qeybsiga beelaha.
Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa xilalka dowladda u hela qaab awood qeybsi, waxaana dad badan sheegayaan in xil ka qaadista Wasiirkan iyo magacaabista Wasiirka Gaashaandhigga uu ka muuqdo isu dheelitir qaabka awood qeybsiga.